Vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana : Fototry ny fampandrosoana -
AccueilRaharaham-pirenenaVondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana : Fototry ny fampandrosoana
Notanterahina tetsy Anosy tao amin’ ny hotely Carlton ny fanombohana ny atrik’asa hifampidinihana mikasika ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana, izay hiarahana amin’ ireo olomboafidy frantsay miisa hatrany amin’ ny 180 no miara-midinika amin’ ireo Malagasy tompon’andraikitra amin’izany. Ity atrikasa ity moa ilay antsoina hoe AICT, na Assise de la Coopération International des Collectivités Malagasy et Françaises andiany faha-2. Ny MID na ny minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana moa no isan’ny mpikarakara. Haharitra telo andro ny hetsika, ary ny mpitandro filaminana malagasy no miantoka ny fiambenana ireo mpizaika.
Tonga nanokatra ity fotoana ity tamin’ny fomba ofisialy ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina sy ireo mambra ny governemanta, ary ireo olom-boafidy maro. Ity fihaonana an-tampony eo amin’ ny firenena malagasy sy frantsay ity moa dia hiresahana betsaka indrindra mahakasika ny fampandrosoana ifotony. Aorian’ity hetsika ity dia hahazo vokatra avy amin’izany ireo olomboafidy eny ifotony, na Frantsay io, na Malagasy.
Nandritra ny kabary izay nataony no nilazan’ ny filoha malagasy Hery Rajaonarimampianina, fa fototry ny fampandrosoana eto amin’ny firenena ny fiaraha-miasan’ny samy vondrom-bahoakam-paritra hitsinjaram-pahefana tahaka izao, satria dia eo no ahafahan’ ny roa tonta mifanakalo mivantana amin’ny lafin’ny fampandrosoana. Noho izany hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia zava- dehibe amin’ ny faritra na kaominina ny hisian’ny fampifandraisana tanàna roa ho mpirahavavy, dia eo ny eto Madagasikara sy ny any Frantsa. Tsy izay ihany fa eo ihany koa ny hisian’ny fiaraha-miasa mivantana, izay nampirisihan’ny filoham-pirenena ihany koa ireo tompon’andraikitra vahiny sy Malagasy.
Raha tsiahivina moa dia mahatratra hatrany amin’ ny 7 tapitrisa Euros isan-taona ny tahan’ny vola hifanakalozana eo amin’ny roa tonta, raha toa misy izany fiaraha- miasa izany, antony ihany koa maha zava-dehibe ny fifampifandraisana ny tanàna roa ho mpirahavavy izay. Raha ny fantatra moa dia efa faritra 13 amin’ ireo 22 amin’ izao fotoana no efa misy izay fiaraha-miasa mivantana amin’ny alalan’ ny fampifandraisana ny tanàna roa, noho izany ho an’ity andiany faharoa amin’ ny fivoriambe ity dia tanjona ny hisian’ny fifampifandraisana ireo faritra 22 amin’ireo faritra hafa any frantsa. Ho fampandrosoana ny firenena hatrany dia nanamarika ny filoham-pirenena nandritra ny fanokafana ny fivoriambe izay nandraisan’ ireo olom-boafidy frantsay sy Malagasy anjara mikasika ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana fa tokony hanana vina mikasika ny fampandrosoana tahaka ny fisandratana 2030 izy ireo. Izany vina izany hoy ny filoham-pirenena no ahafahan’ny faritra sy kaominina mahatratra ny tanjona izay efa napetraka, tazana noho izany ny vina izay napetraky ny filoha izay mifototra amin’ny fampandrosoana hatrany.